Dadka ku hawlan carruurteena wanaagooda waxaa ka go’an wixii la xiriira xuquuqda carruurteena, iyo soo-afmeerida dhibaataynta ilmaha.
Ku soo dhowaada websaytka Korinta Carruur heerkooda sarreeyo. Waa goobta xogta waalidka taas oo ay ku qoran yihiin macluumaad kaa caawimi kara inaad koriso ilmo kalsooni isku qaba.
Inaad noqoto waalid waa shaqada ugu muhiimsan oo aad qaban karto. Waxay noqon kartaa mid waarta. Maaha inaad wax walba ogaato had iyo jeer. Xaqiiqa ahaan, carruurta iyo waalidku waxbay kala bartaan. Markaan sii fahamno carruurteenaba, waxaan sii baranaynaa sidaan u caawimi lahayn inay koraan oo horumaraan.
Markii aan wax badan ka ogaano carruurtaba wax badan ayaan u qaban karaynaa. Mid ka mid ah dariiqooyinka aan sidaas ku samayn karo waxa weeye in aan soo xasuusano ilmanimadeenii dabadeedna malayno sida ilmuhu adduunka u arko.
Waalid ahaan waxaad badanaa ku bixisaa waqtigaaga inaad ahaato waalid wanaagsan, adoo samaynaya wax kasta oo aad u awoodo ilmahaaga marka aad isu miisaamayso baahida iyo dalabka nolol mashquulla.